Sida loo soo dejiyo sawirrada Google Earth - Khariidadaha Google - Bing - ArcGIS iyo iyo ilo kale - Geofumadas
Febraayo, 2019 Featured, Google Earth / Maps, dalwaddii Earth
Qaar badan oo falanqeeyayaasha ah, oo doonaya inay dhisaan khariidado halkaas oo tixraac raaxo leh oo ka socda barxad kasta sida Google, Bing ama ArcGIS imagery lagu soo bandhigo, waxaan hubnaa inaynaan wax dhibaato ah qabin maaddaama ku dhowaad barxad kasta ay marin u leedahay adeegyadan. Laakiin haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan kala soo baxno sawirradaas xallinta wanaagsan, markaa xalalkee ayaa jecel StitchMaps baabi'iyo, hubaal xalka ugu fiican waa SAS Planet.
Qorshaha SAS, waa barnaamij bilaash ah, asalkiisuna yahay Ruush, kaas oo kuu oggolaanaya inaad heshid, xulato oo aad kala soo baxdo sawirro badan barnaamijyada ama server-yada kala duwan. Gudaha server-yada, Google Earth, Google Maps, Yahoo, Bing, Nokia, Yandex, Navitel Maps, VirtualEarth, Gurtam ayaa laga heli karaa iskudhafna lagu dari karaa sawirka, sida sumadaha ama qaababka wadada - waxa loogu yeero isku dhafka- . Waxaa ka mid ah wararkeeda, waxaad ku qori kartaa:
ha ahaato codsi gebi ahaan la qaadi karo, uma baahna rakibo nooc kasta, kaliya iyada oo la fulinayo waxaa suurtagal ah in la fuliyo hab kasta,
suurtagalnimada in la galo feylasha .KML,
qiyaasidda masaafo iyo jidad
load of xog dhameystiran ka server ka kale sida Wikimapia,
Soo dhoofinta khariidadaha moobiilka, waafaqsan meellooyinka sida Apple - iPhone.
Iyada oo loo marayo tusaale wax ku ool ah, waxaa suurtagal noqon doonta in la muujiyo tillaabooyinka looga soo saarayo macluumaadka qaab rastar ah nooc kasta oo ka mid ah barnaamijyada kor lagu soo sheegay. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga helo ayaa ah in sawirrada laga soo dejistay codsigan ay yihiin kuwa la isweydaarsaday, taas oo waqtiga ka badbaadineysa wax soo saarka. Ka duwan waxa ku dhaca sawirrada Google Earth, waa la keydin karaa - la soo dejin karaa, laakiin waxay u baahan yihiin geedi socodyo isdaba-joog ah oo soo socda, oo u turjumaya waqti lumis.
Qaabilaadda tallaabooyinka lagu soo dejinayo sawirrada
Xulashada daba galka meheradda
Tallaabada ugu horreysa waa in la soo dejiyo feylka ay ku jiraan rakibayaasha SAS Planet, xaaladdan waxaa la isticmaalay noocii ugu dambeeyay ee loo soo saaray isticmaalka dadweynaha bishii Diseembar 2018. Faylka waxaa lagu soo dejiyey qaab .zip ah, iyo si loo ordo, waa inay furtaa gebi ahaanba Marka la dhammeeyo, dariiqa loo socdo ayaa furmaya oo Sasplanet fulintiisa ayaa ku taal.
Marka aad barnaamijka, aragtida ugu muhiimsan ee codsiga ka furmay. Waxaa jira dhowr dameerood (midab cagaaran), iyo liiska muhiimka ah ee codsiga (midab casaan), aragtida ugu weyn (midabka midabka leh), muuqaalka muuqaalka (midabka huruudka ah), xaalad qaraabo ah (midabka casaanka), bar gobolka iyo wadataa (fuchsia).
Si aad u bilowdo raadinta, haddii aad ogtahay waxa hab deegaanka looga baahan yahay in khariidada view ugu muhiimsan waa, ilaa aad ka gaarto meesha la doonayo in mid ka mid ah toolbars macluumaadka ilo raster waxaa loo doortay in ay dhacdo tani waa Google .
Haddii aad rabto in aad beddesho isha macluumaadka, kaliya riixi meesha magaca salka tilmaamay, waxaa la doortay ka: Google, Yandex, Nokia, Kosmsnimki, Navteq, Genplan ee Moscow, GeoHub, Bing, Geoportal, Yahoo! , khariidado kale, taariikhi ah, dalxiiska, khariidado badda, Space, khariidada magaalada, galaya, ESRI, ama Google Earth.
Doorashada ka dib, xulashada goobta loo baahan yahay waa la sameeyaa. Iyadoo ay ku xiran tahay sida raajada loo arko, server ayaa loo doortaa, tusaale ahaan sawirka Google ayaa la isticmaalay, maadaama aysan ku jirin nooc kasta oo daruur ah oo goobta jooga.
Kadibna, badhanka ayaa dhaqaajiya Shift, iyada oo tanina daraasaddan waxaa lagu dooran doonaa habka cursada. Si fudud u riix geeska oo u jiido meesha la rabay, guji final ah ayaa la sameeyaa, iyo daaqad furan, oo ah meesha aan ku dhejineyno xuduudaha wax soo saarka ee sawirka la soo xulay.
Daaqada, dhowr tabs ayaa lagu arkay, marka hore iyaga Download, heerka zoom ayaa la doortay. Heerarka zoomku waxay u dhexeeyaan 1 illaa 24 - xalka ugu sarreeya. Marka sawirka la xusho, baarka dhaweyd, heerka ayaa la muujiyaa, si kastaba ha noqotee, daaqadani waa la beddeli karaa. Waxay sidoo kale tilmaamaysaa adeegaha laga soo saari doono badeecada.
In tab soo socda, oo xuduudaheedu wax soo saarka waxaa lagu dhejiyay. Gaar ahaan loogu talagalay raster waxaa loo kaydiyaa macluumaad tixraac da'ayeen. In the box (1), format image tilmaamay in sanduuqa (2) Jidka saarka, sanduuqa (3) server ee la doortay ee sanduuqa (4) haddii lakabka dahaadhaa kasta, in ka (5) sanduuqa qiyaas waxaa loo cayimay, markaa arkay hoose ee urur la yiraahdo Abuuri fayl-gareeyn (6), ikhtiyaarka ugu haboon ayaa lagu calaamadeeyay, kiiskan .w, tayada ayaa wali ka tegaysa default default at 95%iyo ugu dambeyn guji bilow,
image ayaa lagu dhoofiyo ee format JPG, laakiin waxaa laga dhoofiyey karaa qaababkan soo socda: PNG, BMP, ECW (riixo Wavelet Enhancement), JPEG2000, KMZ for Garming (Isgoysmo jpeg), cayriin (hal graphic bitmap), GeoTIFF.
Haddii aad hubisid faylka halkaasoo sawirka la keydiyay, faylasha 4 ayaa la ogaan karaa, faylka .jpg, faylka caawinta, kadib jpgw (waa faylka tixraaca ee hore loo sameeyay .w), iyo .prj oo la xidhiidha sawirka.
Bandhigga Raster ee SIG
Kadib markaad hayso, faylka waxaa lagu furay barnaamij kasta oo GIS ah si loo xaqiijiyo in sawirku si sax ah u yahay goobta loo baahan yahay. Si aad u sii wadato, mashruuca ArcGIS Pro, layers waxaa lagu dhejiyaa qaab muuqaal ah, oo tilmaamaya meesha ay tahay in sawirka cusub lagu dhoofiyo.
Markaad furan tahay, waxaad arki kartaa in sawirku uu ku habboon yahay gebi ahaanba, iyadoo la raacayo qaababka muuqaalka aragtida guud, taas oo ah, miisaanka biyaha ee qaabka vector. Bannaanka kaydka ee sawirka wuxuu ku xiraa meesha ay ku yaalaan xaglaha, sidaas darteed, waxaa loo tixgeliyaa in si fiican loo tixraacay
Haddii aad rabto in aad soo saarto xogta raajada leh waxyaabo kale, sida waddooyinka iyo waddooyinka, oo u isticmaalaan qalab mobile oo loogu talagalay meesha adeegsadaha, isla habka xulashada meesha danta la qaado waa la fuliyaa.
Farqiga ayaa ah in hadda macluumaadka serverka Bing ee la qaadi doono, iyada oo version waddooyinka - jidadka, aragtida ugu muhiimsan waxay muujinaysaa oo kaliya meelaha ugu xiisaha badan ee xiisaha leh, iyo sidoo kale magacyada wadooyinka waawayn.Haddii aad sii wadatid inaad aragto aragtida ugu muhiimsan, faahfaahinta la xidhiidha aagga daraasadda waa la buuxiyaa.
Hadda, haddii raajadii hore loo baahan yahay si loo helo macluumaadka khariidadaha jidka iyo meelaha xiisaha lagu raro, kaliya hybrid - Beelaha, taas oo si fudud u maareyneysa xogta laga soo bilaabo saldhigga goobaha tixraaca, oo leh sawir raajo.
Gudaha qalabka, waxaa jira badhanka lakabada sare leh, markaad soo galeyso, dhammaan basaska sawirada oo la dhajin karo raajada ayaa la soo bandhigaa. Laga bilaabo Google, OSM - Khariidadaha Furan, Yandex, Rostrester, Hybrid Yahoo, Hibrid Wikimapia, Navteq.
Kadibna, saldhiga raajada, Khariidadaha Bing - Satellite Satellite waxaa loo isticmaalaa, ka dibna waxaa lagu soo galaa menu hybrid, iyo in alla intii loo baahdo la hawlgeliyo, - tan ayaa lagu go'aaminayaa, kee hybrid waxay leedahay macluumaad dheeraad ah oo aan caadi ahayn, tusaale ahaan waxaa loo doortay: Google, OSM, Wikimapia, iyo ArcGIS hybrid, aragtida raajada leh lakabyada sare ee hoos ku qoran.
Si loo kaydiyo sawirka, xogta hybrid, aragtida waxaa loo xushay sida kiisaska hore, laakiin waqtigan, marka shaashadda xayeysiisyada sawirka la soo bandhigay, kuwan soo socda ayaa la doortaa: dhar, qaabka la soo saaro, waddada la soo saaro, saldhiga raajada (Bing) ayaa la dhigayaa, iyo Lakabka sare - iskudhafka Google ayaa la doortay - iyo feylasha tixraaca dhulka .w.
Ka dib marka geedi socodka la kaco, sawirka waxaa lagu furay SIG ama software ee aad doorbidayso, waxaana la xaqiijiyay in sawirka la hayo xogta sare ee Google Hybrid laga dhoofiyay. Calaamadaha walxaha ay ku jiraan meesha danta la saaro ayaa la soo bandhigaa, iyo marka qaabka la dhigo, waxay ku taallaa meesha dhabta ah ee biyaha ay tahay inay tagaan.
Nidaamka qodobkan waxaa laga arki karaa kanaalka Youtube ee Geofumadas
Jadwalka ugu dambeeyay
Sida la xaqiijin karo, isticmaalka aaladdu waa wax iska fudud, uma baahna dadaal weyn si loo fahmo dhaqdhaqaaqa mid kasta oo ka mid ah geeddi-socodka iyo qalabka ka kooban. Sidaa darteed, isticmaalkeedu waa mid aad loogu taliyay.
Si ka duwan dadaallada kale ee hawshan ka mid ah soo dejinta sawirrada daba-galka, sida kiiska StitchmapIsbeddelka SASPlanet soo maray waa mid dib loo iibsan karo, kaas oo si isdaba joog ah ugu darsaday qalab iyo waxqabad mid kasta oo ka mid ah cusbooneysiinteeda, iyo sidoo kale helitaanka adeegyo badan iyo ka badan. Maqaalkani waxaa lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo noocii ugu dambeeyay ee xasilloon, laga bilaabo Diseembar 21, 2018, si kastaba ha noqotee, waxaan kuu soo bandhigeynaa xiriirkan, oo ka socda bogga rasmiga ah, oo ay ku jiraan bakhaar dhammaan noocyada la sii daayay tan iyo 2009.
Hambalyo loogu talagalay SASPlanet iyo sanadka 10 ee sii socoshada.
Post Previous" Hore 5 khuraafaad iyo 5 xaqiiqo oo isku dhafan BIM - GIS
Post Next Golaha Dunida Dunida - 2019Next »
Hal Jawaab "Sida looga soo degsado sawirrada Google Earth - Khariidadaha Google - Bing - Muuqaalka ArcGIS iyo ilo kale"
Carl isagu wuxuu leeyahay:
buug aad u wanaagsan. Qof kasta oo raba inuu barto si uu u habeeyo sawirada aanu kugula talineyno inaad na soo booqato koorsada photoshop madrid
Waayo, kuwa magaalada jooga oo dhammu way iman doonaan.